လေနုအေး: December 2008
ကျွန်မခုတလော အလုပ်ကလဲရှုပ်၊ stressကလဲများ၊ အိမ်က အမျိုးသားကလဲ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးရှည်ထွက်နဲ့သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ ဘလော့ဂ်ဘက်ကို လှည့်ဖို့အချိန်မရဖြစ်နေပါတယ်။ သတင်းစကားမှာ ဘလော့ဂ်မှ ခဏခွင့်ယူပါမယ်လို့ ပြောချင်ပေမယ့်စိတ်ကမပြတ်ပါဘူး။ အချိန်ရရင်ရေးမယ်ဆိုပြီး တေးတေးထား မရေးဖြစ်နဲ့ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေလေးတွေနဲ့အတော်ကို ဝေးနေသလို ခံစားရပါတယ်။ အချိန်ရရင် ရသလို ကြိုကြားကြိုကြား လည်ဖြစ်ပေမယ့် ရုံးမှာ အတော်ကိုနှေးနေတာမို့တချို့ ဆို ဖတ်လို့ ကိုမရ၊ တချို့ ဆို ကော်မန့် တင်လို့ မရနဲ့အဲဒီဒုက္ခကလဲ တမျိုး။ တခုခုတော့ တင်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က စိတ်ထဲရှိတာလေးတင်ပြီး ပြန်ဖတ်မိတော့ အားမလို အားမရဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်မတင်ပြပုံ အတော်ညံ့လို့ဆိုလိုချင်တာကို ပီပီပြင်ပြင် မဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်မဆိုလိုချင်တာ တဖြေးဖြေးနဲ့တယောက်နဲ့ တယောက်ကြား ယုံကြည်မှုတွေ ပျက်ပြားလာအောင် မလုံခြုံတော့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတင်ပြပုံ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အသက်ကြီးသူနဲ့ဂေးတွေရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်သလို ဖြစ်သွားတာ အထူးတောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်တခုက ကျွန်မရဲ့ ပို့ စ်တွေမှာ ကျွန်မအဒေါ်လို့သုံးနှုံးခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကျေးဇူးရှင်၊ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အရေးပါဆုံးသူတယောက်က ဂေးဖြစ်နေတော့ ကျွန်မ ဒီပို့ စ်ပြန်ဖတ်ပြီး အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ခုတော့ ရေးမယ်ရေးမယ်လို့ အားခဲထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အဒေါ် (သို့ ) ဦးလေးအကြောင်းကို ရေးရင်း ညံ့ဖျင်းသွားတဲ့ အရင်ပို့ စ်အတွက် အလျော်ပေးပါရစေ။ နားလည်ပေးသူ၊ ကော်မန့် လေးများနဲ့အားပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။
ကျွန်မ ၁နှစ်ကျော်ကျော် အရွယ်မှာ ကြီးကြီးကို အမေက အညာက ခေါ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကြီးကြီးက ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်။ ဆံရစ်ဝိုင်းလေးနဲ့ပုဆိုးလေးကို ထမီလို ၀တ်တဲ့ ခပ်နွဲ့ နွဲ့ ကောင်လေးက အဖေရဲ့ တ၀မ်းကွဲညီငယ်လေးပါ။ တမျိုးလုံးမှာ သူမှ ထူးထူးခြားခြား မိန်းခလေးစိတ်ပေါက်နေခဲ့တာမို့ယောင်္ကျားလေးပေါတဲ့ အဖေတို့အမျိုးတွေထဲမှာ သူ့ ကို ညီအကိုတွေက အားမလို အားမရဖြစ်ခဲ့ပြီး တချို့ အကိုတွေ၊ညီတွေ ဆို မခေါ်မပြောပဲတောင် နေခဲ့ကြပါတယ်။ အမေကတော့ သနားစရာ အဲဒီကောင်လေးကို ကျွန်မကို ထိန်းပေးဖို့အိမ်မှာ ကူညီဖို့ ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မလူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်ကျတော့ ကြီးကြီးက ဂျူးလိယက်လို ခါးလောက်ရှိတဲ့ ဆံပင်စင်းစင်းရှည်ရှည်ကြီးနဲ့အဲဒီခေတ်က ၀ါဝါ၀င်းရွှေတို့ခင်သန်းနုတို့ ဝတ်သလို လည်ပင်းမှာ စတစ်ကော်လံမြင့်မြင့်ကြီးတွေကို ဖက်ရှင်ကျကျ ၀တ်တတ်တဲ့ ကျွန်မစိတ်ထဲ ဦးလေးလို့ဘယ်လိုမှ သဘောထားလို့ မရတဲ့ ကျွန်မ အဒေါ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ အမေက သူ့ ကိုချစ်တော့ ဆင်ပေးရင်း ပြင်ပေးရင်းနဲ့တကယ် မိန်းခလေး တယောက်နဲ့ခွဲမရအောင်တူသွားတော့ အဖေကတော့ အမေဖျက်ဆီးတယ်ဆိုပြီး တဗျစ်တောက်တောက်နဲ့ ပါ။ တကယ်တော့ ၀ဋ်ကြွေးပါသူမို့သူ့ စိတ်က ဘယ်လိုမှ ပြင်လို့ မရပါဘူး။
ကြီးကြီးက တောမှာမွေး တောမှာကြီးခဲ့တာမို့အတန်းပညာကို ၈တန်းအောင်တဲ့ အထိသင်ပြီး ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုအားကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အက၊ ပန်းချီ၊ မိတ်ကပ်၊ ဇာထိုး၊ ပန်းထိုး၊ ပန်းအလှပြင် စတာတွေကို စနစ်တကျ သင်တန်းမတက်ရပဲ စာအုပ်တွေဖတ်၊ လေ့လာတာ အတော်ကို ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ သူရောက်လာပြီး ခဏကြာမှာ ကျွန်မကို ပိန်ညှောင်ညှောင်လေးကနေ ၀တုတ်တုတ် ကောင်မလေး ဘ၀ရောက်သွားအောင် စိတ်ရှည်ပြုစုတတ်သူပါ။ အမေလက်လွှဲရတဲ့ အထိ ဟင်းအမယ်မျိုးစုံကို အရသာထူးအောင် ချက်တတ်ပါတယ်။ စကားပြောကောင်းသူမို့အိမ်နီးနားချင်းတွေက ဘာဟင်းချက်သလဲ မေးရင် သူပြောတာနဲ့ တင် စားချင်စိတ်ပေါက်သွားတတ်ပါတယ်။
မနက်ဖက် ကျွန်မ မိဘတွေ ရုံးသွားရင် သူက ချက်ပြုတ်ပြီးစီးပြီး ကျွန်မကို မနက်စာကျွေး ရေမိုးချိုး သနပ်ခါးလေး ဖွေးနေအောင်လိမ်းပေးပြီး အိပ်ခါနီးမှာ ပုံပြောပြတတ်ပါတယ်။ မြန်မာ့အသံကလာတဲ့ ပုံပြင်လက်ဆောင်ထဲကလို အသံနေအသံထားနဲ့စိတ်ဝင်စားအောင် ပြောတတ်သူမို့သူပုံပြောတာကို ကျွန်မတို့ မောင်နှမ ၃ ယောက်လုံး နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ထူးခြားတာက သူ့ အသံက ယောင်္ကျားတယောက် အသံနဲ့ လုံးဝ မတူပါဘူး။ မာမာအေး၊ တင်တင်မြ၊ ချိုပြုံး၊ ခင်ညွန့် ရီ၊ ရီရီသန့်သီချင်းတွေကို အတော်တူအောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရှိုက်အငင်က အစပေါ့။ ကျွန်မကတော့ မာမာအေးသီချင်းနဲ့ မှ အ်ိပ်တတ်သူပါ။ ညနေဘက် ဖေဖေတို့မေမေတို့ ပြန်မလာခင် ခြေလက်သန့် စင်ပြီး အကျီင်္ီအသစ်လဲပေးပြီး အိမ်ရှေ့ မှာ ဖေတို့ မေတို့ပြန်အလာကို ကြိုစေပါတယ်။ တအိမ်လုံးကို သန့် ရှင်းပြီး ဧည့်ခန်း စားပွဲမှာ ခြံထဲက ပန်းတွေနဲ့ပန်းအိုးလှလှ တလုံးထိုးထားတတ်ပါတယ်။ သူ့ မှာ အနုပညာမျက်စိရှိတော့ ဂမုန်းရွက်လေးတွေကအစ ပွင့်တူရွက်တူပန်းလေးတွေ အဆုံး မြင်သူစိတ်ချမ်းသာအောင် ထိုးတတ်ပါတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲက ဆက်တီခုံလေးတွေက ကုလားထိုင်စွတ်လေးတွေမှာ သူ့ လက်ရာ အ၀တ်စလေးတွေနဲ့ ပုံဖော်ထိုးထားတဲ့ ဂျပန်မရုပ်လေးတွေဆို တချို့ ဧည့်သည်တွေတောင် အပ်ချင်လာတဲ့ အထိ လက်ရာမြောက်လှပါတယ်။
သူက အဖေ့ဥပဒေပညာလဲ အမှတ်တမဲ့ မနေဘဲ လေ့လာလိုက်သေးတာ။ ညနေဘက် အဖေအမှုသည်တွေ လာပြီဆို အဖေပြန်မလာသေးခင် သူက ကောင်းကောင်း ဧည့်ခံတတ်ပါတယ်။ တရားမအမှုက ဘယ်လို၊ ရာဇ၀တ်မှုက ဘယ်လိုနဲ့တကယ့်အားကိုးရတဲ့ Marketing Manager တယောက်လိုပါပဲ။ သူ့ ကိုယ်သူလဲ ဖီးလိမ်းပြင်ဆင် ကျော့မော့နေတော့ တချို့ သိပ်မသိတဲ့ အမှုသည်တွေဆို ဆရာကတော်လို့ခေါ်မိတဲ့အထိပါပဲ။ အဲဒီအခါ သူက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကျွန်မက ဆရာ့ညီမပါလို့ပြန်ရှင်းပြတတ်သေးတယ်။ ဆရာနဲ့ မတွေ့ လို့ဆရာကတော်ဆီမှာခဲ့တယ်လို့အဖေကို သွားပြောရင် အဖေက ဒေါသတွေ ထွက်နေရော။ အမေနဲ့ ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေက တော့ ကြိတ်ရယ်ပေါ့။
သူ ဘယ်လောက် နာမည်ကြီးသလဲဆို ကျွန်မတို့ရပ်ကွက် တရပ်ကွက်လုံးသာမက ရပ်ကွက်နီးချင်းတွေကပါ သူ့ ကို သိကြပါတယ်။ သူမို့မနက်ဖက် ဈေးဝယ်ထွက်ရင် တခါတလေကျတော့ မြန်မာဆန်ဆန် ခြေမျက်စိထိရှည်တဲ့ ကျစ်ဆံမြီးနဲ့ရင်ဖုံးအကျီ်င်္လက်ရှည်လေးနဲ့အကြောင်းမသိတဲ့ အဖွားကြီးတွေဆို မိန်းခလေး အစစ် ထင်ပြီး ချီးကျူး သဘောကျလို့ မဆုံး။ တခါတလေကျတော့ အလိပ်ကြီးကြီးတွေ ကောက်ထားတဲ့ stepတွေနဲ့ဆံပင်နဲ့လိုက်ဖက်စွာ ရှပ်အကျီင်္ အကွက်ကြီးကြီးကို ထမီတိုတိုနဲ့ဝတ်ထားပြန်တော့ ချာလီရဲ့ နတ်မိမယ် အလား။ တခါတလေကျတော့ ဆံထုံးလေးထုံးပြီး နှင်းဆီလေး တပွင့် ကဗျာဆန်ဆန်ပန်ထားပြီး ခြေတလှမ်း ကုဋေတသန်းလို ခပ်ဖွဖွလေးလျှောက် ခပ်လျော့လျော့လေးပြုံး။ ဖက်ရှင်ထွင်တတ်တဲ့ နေရာမှာ အတော်ကို တော်လွန်းလို့အခြေအနေသာပေးရင် ခုခေတ်ဒီဇိုင်နာတွေထက်တောင် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲက မင်္ဂလာဆောင်၊ အလှူဆို အပျိုလေးတွေ အိမ်မှာ တန်းစီနေကြတာ။ မိတ်ကပ်၊ ဆံပင် မေတ္တာနဲ့ပြင်ပေးတာလေ။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်ဆိုရင်တော့ စင်ပေါ်တက်မယ့် သူတွေအတွက် လက်မလည်အောင် ပြင်ပေးရတယ်။ ဒီကြားထဲ ပြဇာတ်ထဲက ရုပ်ဖျက်သရုပ်ဆောင်ရမယ့် မိတ်ကပ်လဲဖြစ်သေး။ ကျွန်မမောင်လေး ရှင်ပြုတော့ အညာရွာလေးမှာ လုပ်တာ ဘယ်မိတ်ကပ်ပြင်ဆရာမှ မခေါ်ပဲ တမျိုးလုံး သူနဲ့ ချည်းပြီးသွားတာ။ ပြောရရင် ကျွန်မ မင်္ဂလာဆောင်မှာ အညာက ကျွန်မဆွေမျိုးတွေ အားလုံး မိတ်ကပ်၊ဆံပင် သူပဲပြင်ပေးတာ။ သူပြင်ပေးထားတာက နာမည်ကျော် မိတ်ကပ်ဆရာတွေ ပြင်တာထက်တောင် ကြည့်ကောင်းနေသေးတယ်။ ကျွန်မ တက္ကသိုလ်တက်တော့ ကျွန်မရဲ့ ဒီဇိုင်နာက သူပါပဲ။ ဂုတ်ဝဲ ဆံပင်လေးတောင် ဆံထုံးလှလှလေး ဖြစ်အောင် ထုံးတတ်တဲ့ ကျွန်မကို သူငယ်ချင်းတွေက အံ့သြကြတာ။ တကယ်တော့ ကျွန်မရဲ့ လျို့ ဝှက်ချက်ကို သူတို့ မှ မသိပဲ။ ခပ်စိမ်းစိမ်းလေး နေပ့ါမယ်ထဲက မို့ မို့ မြင့်အောင်လို ကျစ်ဆံမြီးလေး တစောင်းကျစ် ခြံထဲက စံပယ်တွေ ဝေနေအောင် ပန်ပေးတတ်တာလဲ သူ့ လက်ချက်ပါပဲ။
ခေတ်မှီတဲ့ အဒေါ်အပျိုကြီးနဲ့ နေရသလို သူနဲ့ နေရတာ ကျွန်မသိပ်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်မတန်ပဲ ရီးစားမထားဖို့ကြိတ်ဆုံးမတတ်သေးပါတယ်။ ကျောင်းစာကလွဲလို့တခြားစာမဖတ်ရလို့ကန့် သတ်ထားတဲ့ အိမ်မှာ ဖတ်သင့်တဲ့ အပြင်စာတွေ ကြိတ်ဖတ်ခိုင်းခဲ့တာ ကြီးကြီးပါ။ သူငယ်ချင်းလို့ ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည်ခိုင် ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးက စလို့ကျွန်မကို အပြင်စာတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ စာဖတ်နာတဲ့ သူညွှန်းတဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများက ကျွန်မအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ စာရေးချင်တဲ့ ၀ါသနာကို အများဆုံး မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တာလဲ သူပါပဲ။ ကျွန်မက ၀တ္ထုလေးတွေ ကြိတ်ရေး သူ့ ကိုပေးဖတ် သူက အယ်ဒီတာလုပ်နဲ့ ။ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကို အိမ်က မသိအောင် ပို့ ။ အရွေးခံရတော့မှ မိဘတွေကို အသိပေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်မစာမရေးတော့တာ သိတော့ မြန်မာပြည်ပြန်တိုင်း စာပြန်ရေးဖို့တိုက်တွန်းတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မကို လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတတ်ဖို ၊့ လောကကြီးကို အကောင်းမြင်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့ ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အောင်မြင်အောင် မဆုတ်မနစ်ဇွဲနဲ့ ကြိုးစားဖို့အင်အားတွေ အများဆုံးပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပါ။ ကျွန်မက အရမ်းကြောက်တတ်တော့ ဟိုးငယ်ငယ်လေး ကတည်းကနေ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်အထိ ညဘက်တွေ စာကျက်ရင် ကျွန်မနံဘေး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စာအုပ်တအုပ် ဖတ်ပြီး စောင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ ဘ၀ရဲ့ ၀ဋ်ကြွေးကြောင့် ဒီဘ၀ရောက်နေပေမယ့် သူများအပေါ် ကူညီတတ်ပြီး စိတ်ထားအလွန်ကောင်းတတ်သူမို့နောင်ဘ၀မှာ ဒီဝဋ်က ကြွတ်မယ်လို့ကျွန်မ ယုံကြည်မိပါတယ်။ မိဘကို ရိုသေလေးစား သိတတ်တဲ့ နေရာမှာလဲ အတုယူထိုက်သူပါ။ ကျွန်မမိဘပြီးရင် ကျွန်မဘ၀ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကြီးကြီးရဲ့ ကျေးဇူးတွေက ဆပ်လို့မကုန်အောင် ကြီးမားလှပါတယ်။ အတ်ိတ်ဘ၀ရဲ့ ၀ဋ်ကြွေးအရ ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက် လက်ရှီဘ၀မှာ မိမိစိတ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဖြူစင်သန့် ရှင်းအောင် ထားတတ်ဖို့ က အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့ ဘ၀ရဲ့ သင်ခန်းစာကို ပေးခဲ့တဲ့ ကြီးကြီးကို ဒီပို့ စ်ဖြင့် ရိုသေစွာကန်တော့ပါတယ်။
Posted by တန်ခူး at 4:16 PM 47 comments:
အမည် = ခင်ကလျာနုနယ်ပျိုမျစ်ချစ်ချစ်ချော
ပညာအရည်အချင်း = BSc. MSc. PHD
လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ = xxxXXXxxxXXXxxxXXXxxxXXX
ဒါရိုက်တာ: “ခင်ဗျား… ဒီCVကို ဘယ်လို သဘောရသလဲ… ပညာအရည်အချင်းရော၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံပါ လိုနေတဲ့ နေရာအတွက် တထပ်ထဲပဲ”
မန်နေဂျာ: “ဟုတ်တာပေါ့ဆရာ… ဒီလို လူမျိုးမှ ဇကာတင်ထဲ မထည့်ရင် ဘယ်လိုလူမျိုးသွားထည့်မလဲ”
အမည် = ထိပ်ထင်နန်းစုခေါင်ထွတ်မမလေး
ဒါရိုက်တာ: “ဒီတခါတော့ ကျူပ်တို့ ဦးနှောက်မစားရတော့ဘူးဗျို့ … တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာ… ဒီမှာလဲ နောက်တယောက်… ကဲ.. သူတို့ ၂ ယောက်သာ အင်တာဗျူးခေါ်ဖို့စီစဉ်လိုက်တော့ဗျာ”
မန်နေဂျာ: “စိတ်ချဆရာ… မနက်ဖြန်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်… နာမည်လေးတွေ ကြည့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ သွက်လက်ချက်ချာ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ဖြစ်မှာသေချာတယ်”
အင်တာဗျူုးခန်းထဲ ၀င်လာသည့် မျက်မှန်ထူထူနှင့် အသက် ၅၀ကျော်လောက် ရှိမည် ခန့် မှန်းရသည့် အဒေါ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ဒါရိုက်တာနှင့် မန်နေဂျာမျက်လုံးပြူးသွားသည်။
မန်နေဂျာ: “အန်တီက ခင်ကလျာနုနယ်ပျိုမျစ်ချစ်ချစ်ချော နဲ့ဘယ်လိုများ ပတ်သက်ပါသလဲ… မဟုတ်မှလွဲရော မိန်းခလေးနေမကောင်းလို့မလာဖြစ်ဘူး လာပြောတာ ထင်တယ်… လူကိုယ်တိုင် လာရတယ်လို့ … ဖုန်းဆက်လိုက်ရောပေါ့အန်တီရယ်”
အန်တီ: “ရှင်တို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲရှင်… ကျွန်မက ခင်ကလျာနုနယ်ပျိုမျစ်ချစ်ချစ်ချော ပါ… ကျွန်မကို အင်တာဗျုးဖိတ်လို့ လာတာပါ… ရှင်တို့ လိုချင်တဲ့ ပညာအရည်အချင်းရော… လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံပါ အကုန်ရှိပါတယ်… လုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်သလိုမေးပါ… ကျွန်မဖြေဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ”
ဒါရိုက်တာ: “ခင်ဗျားမေးချင်တာမေးလေ မန်နေဂျာ… ”
မန်နေဂျာ: “အင်းးးးးးးးး… ကျွန်တော်လဲ မေးစရာ အထွေအထူးတော့ မရှိတော့ပါဘူး… CVထဲမှာလဲ အကုန်စုံနေတာပဲ… ဟုတ်ကဲ့… အန်တီ့ကို ရွေးဖြစ်ရင် ပြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်”
အန်တီ: ကျေးဇူးပါရှင်… ခွင့်ပြုပါ…
ဒါရိုက်တာ: “ဟေ့လူ… CVထဲမှာ အသက်ရှာမတွေ့ ပါလား”
မန်နေဂျာ: “ဆရာ… ဒီနိုင်ငံမှာ အသက်က Confidential လေ”
ဒါရိုက်တာ: “တောက်… ဒီအချက်ကို ကျူပ်တို့ ဘာကြောင့်မေ့နေခဲ့လဲ… နောက်တခါ ပြည့်စုံရမည့် အရည်အချင်းထဲမှာ အသက် ကန့် သတ်ချက်ထည့်ဗျာ… ကဲ… နောက်တယောက်ခေါ်”
နာမည်က နန်းဆန်ပေမယ့် အတော်ခေတ်မှီမှီ ၀တ်စားဆင်ယင်ထားသည့် မိန်းမငယ်ဝင်လာတော့ ဒါရိုက်တာက ဒီတခါတော့ မလွဲလောက်ပါဘူးဆိုသည့် အကြည့်နဲ့မန်နေဂျာကို ကြည့်သည်။ မန်နေဂျာက လည်ပင်းမှာ ပုဝါလေးတောင် ပတ်ထားလိုက်သေးသည့် ဖက်ရှင်ကျကျ ၀တ်ထားသည့် မိန်းခလေးကို ရွေးချယ်ဖြစ်ဖို့ တောင် စိတ်ကူးမိနေသေးသည်။
မန်နေဂျာ: “ထိုင်ပါ ထိပ်ထင်နန်းစုခေါင်ထွတ်မမလေး ”
မခို့ တရို့ လေးပြုံးပြပြီး ထိုင်လိုက်သည့် မိန်းခလေးကို ဒါရိုက်တာက အကဲခတ်ပြီး ပထမဆုံးမေးခွန်းအတွက် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။
ဒါရိုက်တာ: “ဒီနေရာကို ရှာရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား”
ထိပ်ထင် : “ဟုတ်ကဲ့ဆရာ… ထိပ်အခက်အခဲမရှိပါဘူး”
ရုပ်ရည်လေးနဲ့ မလိုက်ဖက်စွာ ထွက်လာတဲ့ ယောင်္ကျားသံသြသြကြီးကြောင့် ဒါရို်က်တာရော မန်နေဂျာပါ အံ့သြသွားသည်။ ဘာများမှားယွင်းနေလဲ။ အသံဝင်နေတာတော့ မဖြစ်နိုင်။ နောက်မေးခွန်းတခုနဲ့စမ်းကြည့်သည်။
မန်နေဂျာ : “ဘယ်နှစ်က PHDပြီးပါသလဲ”
ထိပ်ထင် : “ထိပ် ၂၀၀၀က ပြီးပါတယ်ဆရာ… ပြီးပြီးချင်း ခုထွက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကို ၀င်ခဲ့တာပါ”
သေချာသွားပြီ။ ဒါမိန်းမတယောက်ရဲ့ အသံမဟုတ်။ ဒါရိုက်တာက မန်နေဂျာကို အကြည့်နဲ့ အချက်ပေးသည်။ အပြင်ပန်းကြည့်လျှင် တကယ့်မိန်းခလေးစစ်စစ်။ လွဲနေတာက အသံလေးတင်။ မန်နေဂျာသံသယတို့ က လည်ပင်းက ပုဝါလေးဆီအရောက် ကံကောင်းစွာ ပိုးပုဝါလေးက လျောကနဲ ကျသွားသည်။ ထိပ်ထင်က ကဗျာကရာ ပြန်ပတ်လိုက်ပေမယ့် မန်နေဂျာက ထိုခဏမှာ တစုံတခုကို အဖြေပေါ်သွားသည်။
မန်နေဂျာ : “ကောင်းပါပြီ ထိပ်တင်… တကယ်လို့ ရွေးဖြစ်ရင် ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ပါမယ်”
ထိပ်တင် : “ကျေးဇူးပါဆရာ… သတင်းကောင်းကြားရမယ်လို့မျှော်လင့်လျက်ပါ”
ကနွဲ့ ကလျနှင့် ထွက်သွားသော ထိပ်တင်ကို ကြည့်ပြီး နှစ်ယောက်လုံး သက်ပြင်းချ… ပြီးတော့ ရယ်မိကြသည်။
ဒါရိုက်တာ: “အင်းးးး နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိဆိုတာမျိုးပေါ့… … ဒီနိုင်ငံမှာ ကျား၊မ ဆိုတဲ့ Gender ကလဲ Confidential ဆိုတော့… ကြုံမှကြုံတတ်ပလေပေါ့ ”
မန်နေဂျာ : “ဟုတ်ပါ့ဆရာရယ်… ကျားဆိုကျား မ ဆို မ ကတော်သေး… ခုလိုမျိုးကြီးကျတော့… ကျွန်တော်တို့ အတွက် Confidential က အတော်ဒုက္ခရောက်တာပဲဗျို့… နောက်ထပ်များ ဘာတွေ Confidential ထပ်ဖြစ်ဦးမလဲ မသိဘူးနော်”
ဒါရိုက်တာ: “ကျူပ်သာ စာရေးတတ်ရင် Confidentialအလွဲဆိုပြီး ၀တ္ထုလေး တပုဒ်သာ ရေးလိုက်ချင်တော့တာပဲ”
(စာကြွင်း: သြော်စီမှာ အသက်နဲ့ ကျား၊မ ကို အစိုးရက Confidential အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတော့ ရုံးမှာ HR reportတွေလုပ်ရတာ အတော်ဒုက္ခရောက်သွားတာကြောင့် အင်တာဗျူုးတဲ့ သူတွေဆို ပိုဒုက္ခရောက်မှာ တွေးမိပြီး ရေးဖြစ်သွားတာပါ… ဒီမှာတောင် NRIC နံပါတ် နောက်ဆုံးလေးလုံးကလွဲရင် ကျန်တာ Confidential ဖြစ်ကုန်ပါပြီ… ကမ္ဘာကြီးက အဲလောက်တောင် လျို့ ဝှက်ရလောက်အောင် မလုံခြုံတော့ဘူးလား…)
Posted by တန်ခူး at 10:43 AM 22 comments:
သားအကြောင်း ဟိုတစ ဒီတစ
ပထမဆုံး ကျွန်မ ပို့ စ်အတင်ကျဲနေတာနဲ့အိမ်လည်မလာနိုင်တာကို တောင်းပန်ပါရစေ…။ လွမ်းတာအရမ်းပါပဲ…။ အထူးသဖြင့် လည်နေကျအိမ်လေးတွေ မလည်နိုင်တာကိုပေါ့။ အသစ်ကလေးတွေ ဖတ်ချင်လိုက်တာ…။ ကျွန်မ ပျောက်နေရတဲ့ အကြောင်းက သားက ကျွန်မအချိန် တော်တော်များများကို သိမ်းပိုက်ထားလို့ ပါ။ သားကို အရင်က ၃ နာရီကျောင်းကနေ တနေကုန်ကျောင်းကို ပြောင်းတဲ့ကာလ မို့ ပါ။ ကျောင်းကလဲ ကျွန်မရုံးထဲမှာဆိုတော့ ကျွန်မမှာ မနက်စာလဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မစားရ၊ နေ့ လည်စာလဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မစားရ၊ ခါတိုင်း နေ့ လည်အားချိန်လို ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတွေဆီလဲ မလည်ရ။ အတော်ကို စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းပါပဲ။ ပိတ်ရက်ကျတော့လည်း ပြန်ခါနီးပြီမို့shopping ထွက်ရတာနဲ့အချိန်ကုန်။ ဟုတ်ကဲ့… ဆင်ခြေတွေ သိပ်များနေပြီလား မသိဘူးနော်။ ပို့ စ်အသစ်ရေးဖို့ က ခေါင်းထဲ ဘာမှ မထွက်ဘူး။ တွေးလိုက်သမျှ သားအကြောင်းပဲ ဖြစ်နေတော့တာ။ ဒီတော့ သားအကြောင်းလေးနဲ့အင်ဂျင်ပြန်နှိုးပါရစေ(ချိုသင်းကို အားကျလို့ )။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ များနေရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ နောက်ပို့ စ်မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မရေးဖို့ကတိပေးပါတယ်။
“မေမေ ဦးဦးRဇာနည် ဖွင့်ပါ”
“မေမေ ငါတော့ မေ့လို့ မရတော့ဘူး ကြည့်မယ်”
“မေမေ ဦးဦးစိုင်းစိုင်း နဲ့ ကမယ်”
အရင်က Barney… Hi5… Micky Mouse စတာတွေ ပူဆာတဲ့ သားက ခုတော့ အဲဒီလို အသစ်တွေ ပူဆာတတ်လာလို့ကျွန်မ အံ့သြသွားပါတယ်။ သူ့ အဒေါ် ကျွန်မ၀မ်းကွဲညီမက သူကြိုက်တဲ့ သီချင်းခွေတွေကို သားနဲ့ အဖော်စပ်ရင်း ခုတော့ သားလဲ စွဲနေပြီပေါ့။ Rဇာနည် သီချင်းလိုက်ဆိုပြီး “အဆင်ပြေရင် လက်ခုပ်တီးပေးကြပါလား” ဆိုတဲ့ နေရာက အစလိုက်အော် အလွတ်ရနေတော့တာ။ ဖိုးချစ်နဲ့ သားစိုး ဆိုတဲ့ ရွှေအိုးစည် သီချင်းဆို “ဟေ့… ဖိုးချစ်ရေ… ဟေ့…သားစိုးလား” ကအစ “လှုပ်လို့ ရပြီ” အဆုံး အစအဆုံး တပုဒ်လုံးကို ဆိုလိုက် ကလိုက်နဲ့အတော်ကို နှစ်ခြိုက်နေတာကြည့်ပြီး သားနဲ့ ကျွန်မကြားက ကွာဟမှုကို သတိသွားထားမိပါတယ်။ ကျွန်မက ဟစ်ဟော့ကို ခံစားလို့ မရ။ သားကတော့ စိုင်းစိုင်းမှ စိုင်းစိုင်း။ “ဘာလုပ်မှာလဲပြော… လာမရှုပ်ပါနဲ့ တော့” ဆိုတာများ စိုင်းစိုင်းလို ဆောင့်ဆောင့် အောင့်အောင့် တထေရာထဲ ဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်မကြိုက်သည့် ခင်မောင်တိုး၊ ထူးအိမ်သင်၊ ဟေမာ ဖွင့်လျှင် သူက အန်တီဖြူဖြူဖွင့်ပါတဲ့။ အန်တီဖြူဖြူဆိုတာ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို သူက ချစ်စနိုးခေါ်တာပါ။ ကျွန်မက မြို့ မ ဖွင့်လျှင် သူက အိုး… ဒီဇင်ဘာဖွင့်ပါတဲ့။ တော်သေးရဲ့… ICကြိုက်တာတော့ နဲနဲညှိလို့ ရလို့ ။ ကျွန်မကမှ ခေတ်နဲ့ သိပ်အဆက်မပြတ်ချင်လို့ဟစ်ဟော့အခွေတွေ ကြည့်ဖြစ်သေးတယ်။ သားအဖေကတော့ ဖွင့်တာနဲ့ နားဝင်ပီယံ မဖြစ်လို့ဆို နှာခေါင်းရှံ့ တော့တာပဲ။ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ရင်း သားကို မြန်မာဂီတကို ချစ်တတ်အောင် ဘယ်လိုသင်ရပါ့လို့စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ အင်း… သင်္ကြန်သီချင်း ခပ်မြူးမြူးတွေက စရမယ်ထင်ပါ့။ ဟိုတခေါက် မြန်မာပြည်ပြန်တော့ သားကို အိုးစည်လေး ၀ယ်ပေးပြီး ရင်းနှီးအောင် လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီတခေါက်တော့ ၀ါးလက်ခုပ်လေး ၀ယ်ပေးမှလို့စဉ်းစားထားမိတယ်။ အနည်းဆုံး စည်းလေး ၀ါးလေးက စနားလည်ရင် မဆိုးသေး။ တဖြေးဖြေး တဆင့်တက်လို့ပတ္တလား၊ စောင်း ပေါ့။ သားလေး စိတ်မ၀င်စားရင် တွန်းလုပ်ဖို့စိတ်မကူးတာကြောင့် သူ့ အလိုလို မြန်မာဂီတကို ချစ်တတ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
သားနဲ့စည်းကမ်း
ကျွန်မ သားကို တနေကုန်ကျောင်း ပို့ ဖြစ်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက စည်းကမ်းနဲ့နေစေချင်လို့ ပါ။ အိမ်မှာ အကုန် လိုတရနေတဲ့သားက စည်းကမ်းနဲ့တဖြေးဖြေး ဝေးလာသလိုပါပဲ။ သူ့ အဒေါ်က သူ့ ကို ချစ်လွန်းလို့အလိုလိုက်တော့ ရေကအစ သူများ ခွက်ကိုင်ပေးမှ သောက်တဲ့အထိ ငပျင်းလေး ဖြစ်လာပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့တွေ့ ရချိန်ကနဲတော့ ကျွန်မ စည်းကမ်းလုပ်လဲ အရာမထင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အကျီင်္လဲ သူများဝတ်ပေးမှ၊ ဖိနပ်လဲ သူများစီးပေးမှ ဆိုတော့ သူများ အပေါ် မှီခိုလွန်းနေတဲ့ အကျင့်ကို ပြင်မှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး သနားနားနဲ့ ပဲ တနေကုန်ကျောင်းပို့ ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာပါ။
အိမ်မှာ တီဗွီကြည့်လိုက် ကစားစရာတွေ စိတ်ကြိုက် ကစားလိုက် ဘ၀ကနေ အချိန်မှန်စား၊ အချိန်မှန်အိပ်၊ ကိုယ်တိုင်ရေချိုး၊ ကိုယ်တိုင်စား ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရတဲ့ ဘ၀ကို ရုတ်ချည်း ပြောင်းသွားတော့ သူ အတော်လေးကို စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ ဒါတောင် ကျောင်းက ရုံးမှာမို့နေ့ လည်ဘက်တွေ ကျွန်မသွားကြည့်လို ရပါတယ်။ ကိုယ်အိပ်မယ့် မွှေ့ ယာကို ကိုယ်တိုင် သန့် ရှင်းရေးလုပ်၊ အိပ်ပြီးရင် ကိုယ်တိုင် ပြန်သိမ်း။ ကစားချိန်မှ ကစား။ အဲဒီလို နေရတာ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပြီး သူနေချင်သလို နေဖို့ကြိုးစားတတ်သေးတယ်။ ညနေကျ ကျွန်မက သူ့ အဖေကို တနေ့ ဖြစ်တာတွေ ပြောနေတုန်း ငြိမ်နေတဲ့သူက ထပြောပါတယ်။ “ဒုက္ခရောက်နေတယ်” တဲ့။ သူစကားကြားပြီး ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ကျွန်မတို့၂ယောက်လုံး ရယ်မိပါတယ်။
သူစိမ်းတွေကြားထဲ နေရတော့ အမေကို အနားမှာ နေစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မက မေမေအလုပ်လုပ်ရဦးမယ်၊ သားကျောင်းမှာ လိမ်လိမ်မာမာနေလို့ပြောရင် မေမေအလုပ်လုပ်ဘူးလို့ဂျီကျတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မက မေမေအလုပ်လုပ်မှ သားကို အရုပ်တွေ အများကြီး ၀ယ်ပေးလို့ ရမှာ၊ သားစားချင်တဲ့ မုန့် တွေ ကျွေးလို့ရမှာ ဆိုတော့ အရုပ်တွေလဲ မယူတော့ဘူး၊ မုန့် တွေလဲ မစားတော့ဘူးတဲ့။ ကျွန်မ မျက်ရည်ဝဲတဲ့ အထိ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ ပါတယ်။ ဟိုတနေ့ က သူ့ အဖေသွားကြိုတော့ မေမေပိုက်ဆံတွေ အများကြီးသွားရှာနေတာလို့သူ့ အဖေကို ပြန်ရှင်းပြတယ်တဲ့။
သူ မြန်မြန် နေသားကျသွားဖို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။ စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ မျက်နှာ၊ ငိုနေတဲ့ မျက်နှာကို မကြည့်ရက်ပေမယ့် စည်းကမ်းမဲ့၊ သူများပေါ် အမြဲအားကိုးနေရတဲ့ ကလေးမျိုးလေး မဖြစ်စေချင်လို့ရင်နာနာနဲ့ ပဲ ဆက်လှုပ်ရှားနေရတာပါ။ ဒါကြောင့် သားရော ကျွန်မပါ စိတ်ရော လူပါ အတော် ပင်ပန်းနေပါတယ်။ ညရောက်ရင် သားအမိ၂ယောက် တုံးကနဲ အိပ်ပျော်သွားရော။ ခုတော့ မနက်ပို့ ရင် ခါတိုင်းလို ဂျီသိပ်မကျတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့တဖြေးဖြေး တိုးတက်လာမယ် ထင်ပါရဲ့။ အင်း… ဆွေတွေ မျိုးတွေ အဖိုးအဖွားတွေ ကြားထဲ ပြီးတော့ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ကျောင်းဆို သူ အဲဒီလောက် ခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထုံးစံအတိုင်း တွေးမိနေပါသေးတယ်။
10:43 am 03-Nov-2008
Posted by တန်ခူး at 10:48 AM 26 comments: